Fametrahana tetezamita any Soudan Nandamoka ny fifampiresahana
Tsy nisy ny fitohizan’ny fifampiresahana eo amin’ireo mpitandro filaminana sy ny ALC (Alliance pour la liberté et le changement) any Soudan.
Fifanakalozan-kevitra mikasika ny fitsinjarana ny fitondrana tetezamita mandritra ny telo taona izy io. Iza no hitondra sy hitantana ny fanjakana. Ny ALC dia mitaky ny hisian’ny sivily miisa 8 sy miaramila 3 eo anivon’ny filankevitra ankapobeny mandritra ny tetezamita. Etsy an-kilany, miaramila miisa 7 sy sivily 4 no takian`ireo jeneraly. Marihana fa ny talata lasa teo no nitsahatra ny fifanakalozan-kevitra ary tsy nisy ny marimaritra niraisana. Mbola mitohy hatrany ny fihetsiketsehana ataon’ireo olon-tsotra ary hihamafy satria manangasanga ny fitokonana faobe hataon`ireo orinasa any an-toerana.